Inona no tokony ho fantatrao momba ny fiofanana momba ny alika? | Tontolo alika
Tsy maharary mihitsy ny mieritreritra mampiofana ny alikay miaraka amin'ny tanjona amin'ny fifandraisana tsara kokoa aminy ary hahafantatra ny zava-drehetra momba ny fiofanana mety ho azy ireo. Na dia alika alika alika aza ny alikanao dia misy foana ny zavatra tokony ho fantatrao momba azy. fiofanana alika, vaovao, taona, karazany, etc.
Ny kilasy dia manampy antsika hanakaiky kokoa ny biby fiompintsika ary hianatra ny fomba hitondrana azy ireo sy ny fomba hitondrana azy ireo; Na izany aza, zava-dehibe ny fahalalana fa tsy maintsy jerena izany rehefa misafidy ny regimen fampiofanana mety ho tombontsoan'ny tompona sy ny biby fiompy.
1 Fa maninona no alofana ilay alika?
2 Inona ny fiofanana kendrena amin'ny ambaratonga tsirairay amin'ny alika?
2.2 Alika olon-dehibe
3 Inona avy ireo karazana fiofanana?
4 Fampiofanana puppy sy fiaraha-miasa
4.1 Kilasy fankatoavana
4.2 Fiofanana hafa
5 Alohan'ny kendrenao ny alikao amin'ny fiofanana:
Fa maninona no alofana ilay alika?
Io no fomba matihanina mandresy ny fanambin'ny fiainana amin'ny biby, manome azy ireo fahaiza-manao, mampivelatra ireo sy ny fahaizany, manamafy ireo efa ananan'izy ireo, manao izay hahatonga azy ireo hankatò mba hisorohana ny sazy tsy ilaina ary ny tsara indrindra dia tsy misy taona tokony hahazoan'izy ireo fiofanana.
Inona ny fiofanana kendrena amin'ny ambaratonga tsirairay amin'ny alika?
Ampianarin'izy ireo hiaraka amin'ny alika hafa izy
Mianatra mijanona izy ireo, manotra, mipetraka, na mihetsika rehefa miteny azy ireo ianao
Azavao izay fisalasalana anananao momba ny fihetsiky ny biby fiompinao
Manaova namana sakaiza sy tompona biby
Mianatra zava-baovao ary mitazona ny fahaizany mandanjalanja
Mba ho mpankato kokoa, mifehy tsara ny fitondran-tenany, manamafy ny fahalalana ny fiofanana teo aloha
Miasa ary manatsara ny fitondran-tena alika tsy mendrika izay manelingelina
Ampitomboy ny fifamatorana ara-pihetseham-po amin'ny alika
Alika natsangana na tsy mendrika
Manampy amin'ny fanitsiana ny fahazaran-dratsy ny fanaovana kilasy fitondran-tena
Raha manana olana amin'ny fiarahamonina ianao dia ny kilasy vondrona no safidy tsara indrindra
Raha matahotra ianao, ny fampihetseham-batana amin'ny ankapobeny dia hanampy anao hatoky tena bebe kokoa
Inona avy ireo karazana fiofanana?
Amin'ny ankapobeny, ny fiofanana dia hotanterahin'ilay matihanina arakaraka ny fananany manokana, ny karazana alika sy ny taona:
Fampiofanana puppy sy fiaraha-miasa
Este dia tsy maintsy atao ao anatin'ny taona voalohany amin'ny fiainan'ny alika sy aorian'ny vaksiny. Zava-dehibe ny fahafantaranao fa ny alika kely dia mila mifanerasera amin'ny alika sy olona hafa amin'ny toe-javatra samihafa.
Hentitra ny manampahaizana momba ny taonan'ny mpandray anjara amin'ny kilasy mba hiantohana ny fivoarana sy ny fivoarana mitovy amin'izany. Amin'ny dingana voalohany izay tian'ny biby fiompinao manaikitra, mitsambikina ary milalao dia tena mahasoa satria hampianatra azy izany ny fomba fitondran-tena amin'ny alika hafa samy hafa karazana sy habe.
Ary farany, izy ireo koa dia mahasoa ny tompona izay tsy maintsy mahafehy fitsipika fototra sasany hanampiana ny alikany hitondra tena mety amin'ny misy azy.
Nanondro izy ireo manatsara ny fihetsiky ny alikao, manamafy ny zavatra nianarany teo aloha, izy ireo koa dia miasa amin'ny fanitsiana ny fahazaran-dratsy sy amin'ny fifehezan-tena.
Ampiasaina amin'ny ankapobeny izy io mba hanohizana mampianatra ny biby na amin'ny tranga izay ampiasana azy ireo handray anjara amin'ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena na asa hafa na fiarahana miasa.
Misy safidy fampiofanana manokana kokoa, manasongadina kalitaon'ny alika raha tsy izany dia tokony hanana fiomanana mialoha sy traikefa amin'ny fankatoavana ny tompony.
Ao amin'ity sehatra ity izy ireo, kilasy haingam-pandeha izay ahafahan'ny alika mahay mandroso taranja misakana, mandalo tionelina, manao hitsambikina, sns. ary ny Flyball, izay mianatra mianatra milalao ekipa miaraka amin'ny alika hafa.
Alohan'ny kendrenao ny alikao amin'ny fiofanana:
Hamarino tsara fa azonao tsara ny momba an'io
Manandrama kilasy maimaim-poana
Anontanio ny karazana fanamafisana ampiasain'izy ireo
Jereo ny kilasy teo aloha
Tsy manery anao handray fepetra tsy tianao izy ireo
Raiso ny ambin'ny amboa izay manazatra koa, mahatakatra azy ireo ary miara-miasa
Raha manam-pahaizana manokana ny fiofanana tadiavinao dia tadiavo ilay sekoly izay manome anao karazana maro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Inona no tokony ho fantatrao momba ny fiofanana momba ny alika?
Alika inona no alika labradoodle?
Ahoana ny boxer